Youtube | ဆိုင်မွန်စာကြည့်ဆိုဒ်
Bigasoft Video Downloader Pro v3.8.21.5604 Crack
YouTube က Video တွေကို ဒေါင်းလုပ် ဆွဲပေးနိုင်တဲ့ Bigasoft YouTube Downloader Pro နောက်ဆုံးထွက် Version လေး မျှဝေပေး လိုက်ပါ တယ်ဗျာ။ ဒီ Downloader လေးက Video တွေကို ဒေါင်းလုပ် ဆွဲပေးနိုင် ရုံတင် မဟုတ်ဘဲ Portable Deivec , Phone , MP4 Player များနဲ့ DVD စက်များ အတွက်ပါ သင့်တော်တဲ့ Format များ ရရှိအောင် Convert လုပ်ပေးနိုင် ပါသေး တယ်။
High Quality နဲ့ 3D Movies များကို MP4, AVI, WMV, MOV, MKV, FLV, MPG, VOB စတဲ့ Format များအပြင် အခြားသော Format ပေါင်း များစွာကို မူလ အရည်အသွေး မကျစေဘဲ Convert လုပ်ပေးနိုင် ပါတယ်။
Window XP မှ နောက်ဆုံး Window 8 အထိ Support လုပ်နိုင် ပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့် အပြင်ဗန်း ကနေကြည့် လိုက်ရင်တော့ သာမန် Downloader တစ်ခုပါ။ ဒါပေမယ့် မူရင်းဆိုဒ်မှာ ဖော်ပြထား တာကတော့ YouTube မှ Video တွေကို HD (high-definition 720p, 1080p, and 2k), ultra high definition (4K), 3D video and stand definition. အဖြစ်ဒေါင်း လုပ် ဆွဲပေးနိုင် တယ်လို့ ရေးထား ပါတယ်။
ကျွန်တော်လည်း အခုဖော်ပြ ပေးထားတဲ့ Function လေးကို သဘောကျလို့ သူငယ်ချင်းများ အားလုံး အဆင်ပြေပြေ သုံးနိုင်အောင် Full Version အဖြစ် Key ပါထည့် ပြီး တင်ပေး လိုက်ပါ တယ်ဗျာ။
--->Bigasoft Video Downloader Pro 3.8 Features<---
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Friday, June 12, 2015 No comments:
ကဏ္ဍ Download-Manager, Youtube
SnapTube – YouTube Downloader v2.0.0 Apk
အခု တင်ပေးမယ့် Application လေး ကတော့ သူငယ်ချင်းတို့တွေ အနေနဲ့ လိုချင်တဲ့ သီချင်းတွေ ဗီဒီယိုတွေ ကို လွယ်ကူ မြန်ဆန်စွာနဲ့ ဒေါင်းယူ ပေးနိုင်တဲ့ SnapTube – YouTube Downloader ဆိုတဲ့ Application တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
လိုချင်တဲ့ သီချင်းတွေ ဗီဒီယိုတွေကို နာမည်လေး ရိုက်ပြီး ရှာဖွေ လိုက်ရုံ ပါပဲ အဆိုတော် နာမည်တွေ သီချင်း နာမည်တွေ သရုပ်ဆောင် နာမည်တွေ ရုပ်ရှင် နာမည် တွေကို သိရုံ နဲ့ ရှာဖွေနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Android OS 2.1 နှင့် အထက် ဖုန်းများမှာ အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကဏ္ဍ Android, Download-Manager, Phone Application, Youtube
မြန်မာပြည်မှာ mb တွေနဲ့ အင်တာနက်ကို အသုံးပြုနေ ရတာ သီချင်းပဲ နားထောင်ပြီး video မကြည့်ချင် သူများ အတွက် ချွေတာ ရာလဲ ရောက်တာပေါ့ Youtube က video တွေကို mp3 အနေနဲ့ Download ချင်သူများ အတွက် ဖော်ပြပေး လိုက် ပါတယ်ခင်ဗျာ
ပထမ ဦးစွာ browser (ကမ္ဘာလုံး) ကနေ youtube.com ကို သွားပြီး လိုချင်တဲ့ သီချင်း ရှာပါ။
အပေါ်က ပုံမှာ ပြထား သလို video တွေ ပေါ်လာ ရင် ကိုယ် ဒေါင်းချင်တဲ့ video ပေါ်မှာ ဖိနှိပ် ထားလိုက်ပါ ကျနော် Chit Tae Sate SoeTar-Po Po Hay Thar ကို ဖိနှိပ် ပြထား ပါတယ်။
အပေါ်က ပုံလို အကွက် ပေါ်လာရင် copy link URL ကိုနှိပ်ပါ။
Youtube မှ Mp3 app ကို ဖွင့်ပါ convert Video အပေါ်က http:// ကိုနှိပ်ပါ အားလုံး ဖျတ်ပစ်ပါ အဲနေရာမှာ ဖိနှိပ်ထားပြီး paste နှိပ်ပါ
Convert Video ကိုနှိပ်ပါ အပေါ်က ပုံလိုမျိုး Processing Video ဆိုပြီး loading လုပ်နေပါမယ်။
အပေါ်က ပုံလို Video successfully converted to mp3 လို့ ပေါ်လာရင် Download ကို နှိပ်ပြီး mp3 အနေနဲ့ youtube က video ကို mp3 အဖြစ် Download လို့ ရပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
ကဏ္ဍ Youtube, နည်းလမ်းများ
YouTube App ကနေ videos တွေ ဘယ်လို ဒေါင်းရ မလဲဆိုတဲ့ IOS User တွေ အတွက်ပါ။ ဒီ tweak လေး ကတော့ youtube app ထဲမှ video များကို အလွယ် တကူ ဒေါင်းပြီး camera roll ထဲတွင် save နိုင်ခြင်း။ import music library ပြုလုပ်ပြီး music app ထဲမှ နားဆင် နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ် ခင်ဗျာ။
အားလုံးပဲ ကြိုက်နှစ်သက် ကြမယ် ထင်ပါတယ်။
tweak > Cercube (iOS 7.x.x-8.x.x)
source တွင် အခမဲ့ ရယူနိုင် ပါတယ် ခင်ဗျာ။
ကဏ္ဍ Download-Manager, iDevice, iPhone, Youtube
ကလေးတွေအတွက် Google မှ ထုတ်ဝေ လိုက်တဲ့ Youtube Kids App for iOS & Android
Youtube ဟာ ကမ္ဘာ့ အကြီးဆုံး Video Sharing Site တစ်ခုလို့ ဆိုနိုင် ပါတယ်။ Youtube မှာ ဗီဒီ
ယို ပေါင်းစုံကို ကြည့်ရှု နိုင်မှာပါ။ Youtube ကို ဖုန်းတွေ ကနေ ကြည့်ရှု နိုင်ဖို့လည်း Google က
နေ iOS နဲ့ Android OS သုံး ဖုန်းတွေ အတွက် Youtube ကို Mobile App အနေနဲ့ ထုတ်ဝေပေး
အခုတော့ Google ကနေ ကလေးတွေ အတွက် သီးသန့် အနေနဲ့ Youtube Kids လို့ ခေါ်တဲ့
application ကို ထုတ်ဝေပေး လိုက်ပါပြီ။
ဒီ application ကို iOS နဲ့ Android OS ၂ မျိုး အတွက် ရရှိနိုင် မှာပါ။ Youtube Kids ဆော့ဝဲကို
အသုံးပြုခြင်း အားဖြင့် ကလေးတွေရဲ့ အသက် အရွယ်နဲ့ သင့်တော်တဲ့ ဗီဒီယိုတွေ ၊ ကလေး
တွေ လေ့လာစရာ ဗီဒီယိုတွေ ကိုပဲ ရွေးချယ် ဖော်ပြပေး မှာပါ။
ကလေးတွေ အတွက် ဖုန်းတွေ၊ Tablet တွေ ပေးကိုင် ထားတယ် ဆိုရင် သာမန် Youtube app
အစား ကလေးတွေ အတွက် သီးသန့် ထုတ်ဝေပေးထားတဲ့ Youtube Kids App ကို သွင်းပေး
iPhone / Pad နဲ့ Android ဖုန်း အသုံးပြုတွေ အတွက် Youtube Kids for iOS Android ကို
အောက်က link များမှာ ရယူနိုင် ပါတယ်။
▼ iPhone/Pad အားရယူရန် ▼ OR ▼ Android အားရယူရန် ▼
ကဏ္ဍ Android, Phone Application, Youtube
ImTOO YouTube Video Converter 5.6.2.20141119 | 26.36 MB
ကဏ္ဍ Converter, Download-Manager, Player, Youtube
Tipard YouTube Converter 5.0.10 Multilangual | 23.62 MB
– Download videos from YouTube, Yahoo, etc with lightening speed
– Convert local videos to any popular video format with ease
– Preserve 100% original video quality and easy to use
We all love YouTube because we are entitled to upload our family videos and other videos to it so our friends and family that are not with us can enjoy them on the Internet. In addition, we are kept informed of whats happening in the world. Sometimes the downloading speed of the YouTube videos are not satisfying, therefore we needathird-party tool to help us download the videos very quickly. Besides, its able to convert the YouTube videos to any popular video format as you like. Thus you are free to enjoy the converted files on multiple media players like iPhone 4, iPad, iPod nano, Galaxy S, Nokia, BlackBerry and more other digital media players.
Besides download and convert YouTube videos to your needed video formats, its capable of converting videos on your local disc to popular video format like MP4, MOV, AVI, FLV, MKV, ASF, M4V and more with vivid video effect. In addition, you are free to take out the audio files from video files and convert them to MP3, M4A, AAC, AC3, WMA, WMV, OGG format. The converted files are compatible with various mainstream multimedia players. You are allowed to enjoy the converted files wherever and whenever you want. Tipard YouTube Converter isamust-have for the YouTube fans to enjoy the multimedia life.
Tipard YouTube Converter is the multifunctional streaming video Converter, which allows you to download YouTube at fast speed, and it can support adding and converting local videos files you have. You can convert downloaded and local files to your portable devices, such as iPad Air, iPad mini, iPhone 5S 5C, iPod Touch, Samsung series phone, etc. Tipard YouTube Converter is very easy to use for anyone due to its initial interface. The progress bar will show you how much converting progress completed. And you can also click Pause or Stop button to control the downloading or converting process. It is the professional yet easy to use converter.
ကဏ္ဍ Converter, Download-Manager, Youtube
အင်္ဂလိပ် ရုပ်ရှင် များစွာကို ရှာဖွေဒေါင်းယူနိုင်တဲ့ - Aiseesoft Video Downloader 6.0.22 + Crack
အခု တင်ပေး လိုက်တဲ့ Software လေးကတော့ ကွန်ပြူတာမှ Video များကို ရှာဖွေပြီး ဒေါင်းယူ ပေးနိုင်တဲ့
Aiseesoft Video Downloader ဆိုတဲ့ နောက်ဆုံးထွက် Version လေးကို တင်ပေးလိုက် ပါတယ်ဗျာ။
Youtube အပါအ၀င် အခြားသော Online Video Download ဆွဲယူနိုင်မယ့် Website ပေါင်း 150 ကျော်မှာ
တင်ထားတဲ့ Video များကို လွယ်ကူ လျှင်မြန်စွာ ရှာဖွေ ဒေါင်းယူနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါင်းယူ ရတာလည်း
လွယ်ကူပါတယ် Search Box မှာ မိမိကြည့်ချင်တဲ့ Movies နာမည်ကို ရိုက်ထည့် လိုက်ရုံနဲ့ Movies ကျလာ
မှာပါ။ အသစ်ထွက်တဲ့ English Movies များစွာကို HD Quality အတိုင်း ရရှိအောင် ဒေါင်းယူနိုင်မှာ ပါ။
ဒေါင်းယူရရှိပြီးသား Video Format များကိုလည်း ကွန်ပြူတာမှာ တင်ကြည့်နိုင်ရုံသာမက နာမည်ကြီး Device
တွေဖြစ်တဲ့ iPhone, iPad, Samsung Galaxy S4, အစရှိတဲ့ Device တွေမှာပါ ကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ အတွက် Video
များကို Convert လုပ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။
အမြဲတမ်း အသုံးပြုနိုင်အောင် Full Version အဖြစ် Crack File ကိုပါထည့် သွင်းပေးထားပါတယ်ဗျာ။ Crack File
ကို Rar ဖြည်ပြီး ရလာတဲ့ File ကို Copy ကူးပြီး Dick: C ထဲက Program File ထဲက Aiseesoft Video Down
loader ထဲကို Paste လုပ်လိုက်ရုံနဲ့ Full Version အဖြစ် အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။
အသေးစိတ်ကိုတော့ အောက်မှာ ဆက်လက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်ဗျာ။
▼ userscloud ▼
ကဏ္ဍ Download-Manager, Video-software, Youtube
save2pc Ultimate 5.41 Build 1504 | 5.85 MB
ကဏ္ဍ Download-Manager, Flash-Software, Tools, Video-software, Youtube
Youtube ပေါ်က Video တွေ ဘာ Software မှ မသုံးဘဲ အလွယ် ဒေါင်းနည်း
အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ ခင်ဗျာ … ။
ဒီနေ့တော့ ပိုက်ဆံ နည်းနည်း ဖြုန်းချင် တာနဲ့ Youtube ပေါ် တက်ပြီး Hot ဖြစ် နေတဲ့ video တွေ ဒေါင်း မလို့ဗျာ IDM ကတော့
ရှိတယ် ဒါပေမယ့် IDM က တစ်ချို့ Video ဆွေဆို download မပေး ဘူးဗျာ….။
အဲ့ဒါနဲ့ လက်ကမြင်း ပါလေရော။ အဲ့မှာ ဘာ သွား တွေ့သလဲ ဆိုတော့ ဘာ ဆော့ဝဲမှ မလိုဘဲ Youtube ပေါ်က video တွေ
ကို ဒေါင်းလို့ ရအောင် လုပ်မယ် ပေါ့ဗျာ ဘယ်လို လုပ်မှာလဲ ???
ပထမ ဦးဆုံး သားတို့ youtube ပေါ်က ကိုယ် ဒေါင်း ချင်တဲ့ Video တွေ ဆီ အရင် သွား လိုက်ပါ။
ရောက်ပြီ ဆိုရင် သား ၀ိုင်းပြ ထားတဲ့ လင့်ကို ကြည့်ပါ ။ www.youtube.comxxxxx ပေါ့ အဲ့မှာ (www.) နေရာကို (ss) အစား
ထိုးပေး လိုက်ပါ အောက်က ပုံ အတိုင်းနော်
Enter ခေါက်ပါ ။ ခဏလေး စောင့်ပါ ။ အဲ့ဒီမှာ တခြား လင့်ကနေ box တစ်ခု ကျလာပါ လိမ့်မယ်
အဲ့လိုလေး ပေါ်လာ ရင်တော့ အရင်ဆုံး download ဆိုတာ လေးကို နှိပ်ပါ။ Generate လုပ်နေတုန်း ခဏလေး စောင့်ပါ။
ပြီး သွားရင် အောက်က ပုံ အတိုင်း ပေါ်လာ ပါလိမ့်မယ်
အဲ့ဒီမှာ Mp4 ရယ် more ဆို တာလေး ပါလိမ့်မယ် MP4 ဆိုတာလေး နှိပ် လိုက်ရင် တော့ Mp4 Format နဲ့ ဒေါင်း ပါလိမ့်
မယ် ၊ ကိုယ်က တခြား Format နဲ့ ဒေါင်းချင် ရင်တော့ More ဆိုတာလေး နှိပ်ပြီး ကြိုက်တာနဲ့ ဒေါင်းနှိင် ပါ တယ် (မသိ
သေးသော သူများ အတွက်ပါ p အများဆုံး ကတော့ Resolution ရုပ်ထွက် အကောင်းဆုံးပါ )
ဖုန်းနဲ့ လည်း ဒီ အတိုင်း ပါပဲ၊
From: Pyae Phyo (MMiTD) by Minoke kar
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Saturday, August 16, 20143comments:
YouTube Downloader Pro 4.8.0.2 (YTD) Final
YouTube, Google Video, Yahoo Video နှင့် Facebook Video တွေ အတွက် လွယ်ကူစွာ ဒေါင်းနိုင်သော
YouTube Downloader Pro ရဲ့ Final Version 4.8.0.ကို တင်ပေးလိုက် ပါတယ်။ သင် အလိုရှိရာ Video ရဲ့
လင့်ကိုထည့်ပြီး download ကို click ပြီး Ok button နှိပ်တာနဲ့ အဆင်ပြေ သွားပါပြီ။
ဒေါင်းပြီးသား ကိုလည်း တစ်ခါတည်း Iphone, PSP, Cell Phone, Windows Media, Xvid and MP3 စ
သည့် ကြိုက်သည့် အမျိုးအစားကို convert လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဖိုင်ဆိုဒ် ကတော့ 11Mb ပဲရှိပါတယ်။
၀င်းဒိုး အားလုံး အသုံးပြုနိုင် ပါတယ်။
- Fixes for saving videos from streaming sites.
Tomabo YouTube Video Downloader Pro v3.7.0 + Keygen(11Mb)
YouTube Video Downloader လေးတစ်ခုနဲ့ မိတ်ဆက်ပေး ချင်ပါတယ်။ download speeds
ကို 500% ထိ ဆွဲပေးနိုင်တယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။ YouTube မှ Video များကို 1080p, 720p
HD and HQ videos စသည့် မိမိကြိုက်ရာ Quality ကိုရွေးပြီး Download ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
Internet Explorer, Chrome or Firefox စသည့် မည်သည့် browser မှာ မဆို အသုံးပြုနိုင်ပါ
တယ်။ videos file များကိုလည်း MP4, WMV, AVI, 3GP, MPG နှင့် iPhone, iPad, iPod,
PSP, cell phone များအတွက် Convert လုပ်နိုင်ပါတယ်။
Full ဖြစ်စေဖို့ အတွက် ဒေါင်းလော့စ်ဖိုင် ထဲမှာ Keygen လေးကို ထည့်သွင်းပေး ထားပါတယ်။
ဖိုင်ဆိုဒ် 11Mb သာရှိပြီး ၀င်းဒိုးအားလုံး အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
အသေးစိတ် အင်စတော လုပ်နည်းကိုတော့ ဒေါင်းလော့စ်ဖိုင်ထဲ မှာဆက်ဖတ်ပါ။
ဆော့ဖ်ဝဲ မလိုပဲ Youtube ဗီဒီယို အလွယ် တကူ Download ယူနည်း
တကယ် ဘာဆော့ဖ်ဝဲမှ မလိုပါဘူး။ Youtube က ဗီဒီယိုတွေကို အလွယ်တကူ Download
မိမိ Download ယူချင်တဲ့ Youtube ဗီဒီယိုကို ဖွင့်ပါ။
https နေရာတွင် s ကိုဖြုတ်ပေးပါ။
www.youtube.com နေရာတွင် www.ssyoutube.com ဖြစ်ရန် ss ကို Youtube အရှေ့
ဥပမာ - ကိုယ်က https://www.youtube.com/watch?v=NG2zyeVRcbs အဲ့ သီချင်းကို
ဒေါင်းမယ်ဆိုရင် s ဖြုတ် ss နှစ်လုံး ထည့်လိုက်တဲ့ အခါ
http://www.ssyoutube.com/watch?v=NG2zyeVRcbs ဆိုပြီး ဖြစ်သွား မှာပါ။
ပြီးရင် Enter ခေါက်တော့ savefrom.net ဝဘ်ဆိုဒ်ကို Direct လုပ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့မှာ FLV 240p, FLV 360p, MP4 360p,WebM 360p, 3GP 144p, 3GP 240p အစ
ရှိတဲ့ Format များစွာထဲမှာ ကိုယ်ကြိုက်ရာကို ရွေးလိုက်ရုံပါပဲ။
ကျနော်ကတော့ Download speed 64 Mbps နဲ့မို့ FLV 360p ကို ၄ မိနစ်ထပ် မကြာပဲ ပြီး
သွားပါတယ်။ လက်ရှိ မြန်မာပြည်က ကော်နက်ရှင်အနေအထားနဲ့ ဆိုရင် Format နိမ့်တာ
ကို ရွေးမှ အဆင်ပြေမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ အင်တာနက်လိုင်းကောင်းနေရလည်း ကိုယ် အ
ဆင်ပြေ သလို ရွေးချယ် ဒေါင်းသွား နိုင်ပါတယ်။
http မှာ s မဖြုတ်ရင် မရပါဘူး။ သူက secure ဖြစ်တဲ့ အတွက် untrusted ကော်နက်ရှင်ပဲ
ပြမှာ ပါ။ ပြီးတော့ youtube ရှေ့မှာ ss ထည့်ရတဲ့ အကြောင်းက Third party application
ကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ savefrom.net ရဲ့ ဒိုမိန်းကို rediret လုပ်သွားလို့ပါ။
အားလုံး အသုံးပြုလို့ အဆင်ပြေမယ်လို့ မျော်လင့်ပါတယ်။
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Friday, February 28, 2014 No comments:
ကဏ္ဍ Youtube, နည်းပညာ, လမ်းညွှန်
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Thursday, February 20, 2014 No comments:
ကွန်ပြူတာမှာ IDM ကိုတော့ အများဆုံး အသုံးပြု့ကြပါတယ်။
From: စိုင်းသူ by THOMAS PHILIP
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Tuesday, February 11, 2014 No comments:
MediAvatar YouTube Video Converter 3.5.5.20130917 + Serial Key & Crack
YouTube ပေါ်က Video များကို ဒေါင်းလုပ် ဆွဲပေးပြီး တစ်ခါထဲ Convert လုပ်ပေးနိုင်
တဲ့ Software လေးတစ်ခု တင်ပေး လိုက်ပါတယ်ဗျာ။
Browser ထဲမှာ YouTube ကို ၀င်စရာ မလိုဘဲ အခုတင်ပေး လိုက်တဲ့ Software ထဲ
မှာ မိမိလိုချင်တဲ့ Video များကို အလွယ်တကူ ဒေါင်းယူနိုင်ပြီး မိမိလိုချင်တဲ့ Video File
အဖြစ် Convert လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Support လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ Video Format များကတော့ AVI, MPEG, H.264/MPEG-4
AVC, MPG, MPEG -1, MPEG -2, MPEG -4, MP4, FLV, DivX, XviD, ASF, 3GP,
3G2, SWF အပြင် အခြားသော Format တော်တော်များများကို Support လုပ်ပေးနိုင်
Video ရုပ်ထွက်ကလည်း HD ရုပ်ထွက်အဖြစ် ရရှိနိုင်တယ်လို့ မူရင်းဆိုဒ်မှာ ဖော်ပြထား
ပါတယ်ဗျာ။ အမြဲတမ်းသုံးနိုင်အောင်လို့ Serial Key နဲ့ Crack File နှစ်မျိုး စလုံးတင်ပေး
လိုက်ပါတယ်။ အဆင်ပြေတာနဲ့ သာအသုံးပြုကြပါနော်။ အသေးစိတ်လေ့လာချင်တယ်
mediAvatar YouTube Video Converter is one of the most easy-to-use YouTube FLV Converter for downloading and converting YouTube FLV/HD videos from YouTube to other video formats, such as AVI, MPEG, H.264/MPEG-4 AVC, MPG, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, MP4, FLV, DivX, XviD, ASF, 3GP, 3G2, SWF, etc. With the 1-step “downloading + converting” solution of mediAvatar YouTube Video Converter, you can download/convert YouTube FLV/HD videos for playback on your multimedia devices with only one click. Any digital player can beagreat YouTube video player once you have this YouTube/FLV converter!
- Browse and download any YouTube video you like through IE’s right-click menu with mediAvatar YouTube Video Converter installed on your PC.
- Directly dragaYouTube video URL to the application or “Drop Zone” to copy YouTube videos to iPod, iPhone or other players instantly.
- Preseta“post-Task Action” (system shut down, hibernate, stand by, exit application) and the preset action will be performed automatically at the end ofatask.
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Sunday, February 09, 2014 No comments:
ဗွီဒီယိုတွေကို တိုက်ရိုက် ဒေါင်းယူမယ့် Wondershare AllMyTube
Wondershare AllMyTube 3.8.0.4 + Patch + Keygen (34Mb)
ဒီကောင်လေးကတော့ YouTube downloader and YouTube converter လေးပဲ
IE, Firefox or Chrome ,YouTube, Hulu, Facebook, Megavideo, Vimeo,
Metacafe, VEVO, Liveleak အစရှိသည်တို့မှာ videos များကို တိုက်ရိုက်ဒေါင်း
လော့စ်ချနိုင်သည့် အပြင် video websites မှ ဇာတ်ကား များကိုလည်း download
ပြီးတာနဲ့ လိုချင်တဲ့ convert ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
Download Button ကိုနှိပ်လိုက် ရုံဖြင့် ရောက်ရှိနေရာမှ ရုပ်ရှင်ကားကို download
URL ကိုယူပြီး Copy and Paste ထည့်ပေးရုံနှင့်လည်း လိုရာ video ကို download
ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့ 34Mb ပဲ ရှိပါတယ်။
Full ဖြစ်စေဖို့ အတွက် ဒေါင်းလော့စ်ဖိုင်ထဲမှာ Patch + Keygen ကို ထည့်သွင်း ထားပါ
- Copy and Paste URL: Copy and paste URL of the video to download the target video
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Tuesday, February 04, 2014 No comments: